မြန်မာ့ဆန်စပါး ဈေးကွက်အလားအလာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် ဒုတိယဥက္က ဌ ဦးအောင်သန်းဦးနှင့် တွေ့ဆုံအင်တာဗျူး
Post byစိုးချစ်ချစ်ပိုင်(AMIA) on Monday, March 11,2019
ယခုနှစ်တွင် ပြည်ပဆန်တင်ပို့မှု ကျဆင်းနေသည်။ ဓာတ်ပုံ- U Aung Than Oo FB
မြန်မာနိုင်ငံဟာ စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး လူဦးရေအများစုဟာ လယ်သမားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ ကြောင့် ဆန်ဈေး အတက်အကျ၊ ဆန်ဝယ်လိုအား အနည်းအများဟာ နိုင်ငံကို အနည်းနဲ့၊ အများ ရိုက်ခတ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက ဆန်ဝယ်လက်ဖြစ်တဲ့ တရုတ်ကလည်း သူ့ဆီကို တင်သွင်းတဲ့ ဆန်၊ ဆန်ကွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေ လာတာတွေကိုပဲ အား ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက်အတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိမလဲ၊ မြန် မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ရော၊ အစိုးရပိုင်း အနေနဲ့ရော ဘာတွေပြင်ဆင်နေသလဲ၊ မြန်မာနိုင် ငံ ဆန်စပါးဈေးကွက်ရဲ့ အလားအလာကရော ဘယ်လိုရှိမလဲ။
ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးအောင်သန်းဦးကို AMIA- Farmer Digital TV ရဲ့ သတင်းထာက် မစိုးချစ်ချစ်ပိုင်က သွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထား ပါတယ်။
မေး။ ။ တရုတ်နိုင်ငံဘက်က ဆန်နဲ့ ဆန်ကွဲ တင်ပို့မှုမှာ တရားဝင်ကိုပဲ အားပေးမယ်။ တရားမ၀င် ကုန် သွယ်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူတာတွေ လုပ်မယ်လို့ တရားဝင် အသိပေးလိုက်တယ်လို့ သိရပါ တယ်။ တရားဝင် တင်ပို့တဲ့ဘက်ကို သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ။
ဖြေ။ ။ တရားဝင်တင်ပို့မှုနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင်လဲ အခက်အခဲ မရှိနိုင်ပါဘူး။ အခုလဲ အချို့ဆန်ကွဲတို့ ဘာတို့ကို တရားဝင် တင်ပို့နေတာတွေ ရှိတယ်။ တရားဝင်သွားဖို့ မြန်မာဘက်ကတော့ အကုန်ပြင်ဆင် ထားပါတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ အရင်တုန်းကတော့ AQSIQ လို့ခေါ်တဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ကုန်ပ စ္စည်း စစ်ဆေးရေးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပိုးမွှားကာကွယ်ရေးဌာန၊ အစရှိတဲ့ ပစ္စည်းစစ်ဆေးရေးဌာန တွေနဲ့ MOU လက်မှတ်တွေ ထိုးထားတယ်။ ဒီအတွက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခက်အခဲ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု ပြုတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်း တွေဖြစ်တဲ့ ပိုးမွှားကိစ္စတို့တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အခြား EU တို့ ဂျပန်တို့ကိုတောင် ပို့နေနိုင်သေးတာ။ တရုတ်ဈေးကွက်အတွက် လုပ်ဖို့ အပမ်းမကြီး ပါ ဘူး။
မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို ဆန်နဲ့ ဆန်ကွဲ တရားဝင် တင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက် ဘာအချက်တွေ ပြင် ဆင်ထားလဲ။
ဖြေ။ ။ တရားဝင်လမ်းကြောင်းက ရောင်းနိုင်ဖို့အတွက် အခွန်သက်သာခွင့်တွေ၊ နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ ရှိနေတဲ့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွန် ခံစားခွင့်တွေရဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း သူတို့ဘက်က တင်သွင်းတဲ့ ပ စ္စည်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ အခွန်သက်သာခွင့် ပေးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလဲ တင်သွင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အခွန်သက်သာခွင့် ရအောင်လို့ ကုန်ပစ္စည်းချင်း ဖလှယ်တဲ့ စနစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်နေ တယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနေ တင်သွင်းနေတဲ့ လယ်ယာသုံး ကိရိယာတွေ၊ ဓာတ်မြေသြဇာ ပိုးသတ် ဆေးအစရှိတဲ့ သွင်းအားစုတွေ ၀ယ်သွင်းတဲ့အခါမှာ အခွန်သက်သာခွင့်ရအောင် လုပ်ပေးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ တင်သွင်းတဲ့ ဆန်တွေကိုလဲ ဟိုဘက်မှာ အခွန်သက်သာခွင့်ရအောင် ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲ တစ်ဘက်က ကိုတာကို ကျင့်သုံးသလို၊ တစ်ဘက်က ဘာတာစနစ်နဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။
မေး။ ။ ကုန်ပစ္စည်းချင်း ဖလှယ်တဲ့ Barter System (ဘာတာစနစ်)မှာကော အားလုံးပါဝင်လာနိုင် ဖို့ ဘယ်လို စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီစနစ်အတွက် ပြည်တွင်းမှာ တင်သွင်းနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်မယ်။ နှစ်ခု ပေါင်းစပ်မှာပေါ့။ ဆန်သွင်းလို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ သူတို့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ ပစ္စည်းဝယ် သွင်းတယ်ဆိုရင် နှစ်ခုချိတ်ဆက်ရင် သူ့ အတွက်လဲ အခွင့်အရေးရှိမယ်။ ဆန်သွင်းတဲ့ သူလဲအခွင့်အရေးရှိမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒီအပေါ်ကို ပါလာကြမှာပါ။
မေး။ ။ လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်မှာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနေ ဆန်တင်ပို့မှုက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တရားမ၀င် ကုန် သွယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက်ကြောင့် အထိနာခဲ့ရတယ်။ လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ပြည်ပဆန် တင်ပို့မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘာတွေပြင်ဆင်သွားဖို့ လိုမလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့က တစ်နှစ်ကို ဘယ်လောက်ပို့မယ် ဆိုတဲ့ market Plan ဆွဲဖို့လိုမယ်။ ဥပမာ တစ်နှစ်ကို တန်ချိန် သုံးသိန်းပို့မယ် တရုတ်နယ်စပ်က ဘယ်လောက်ပို့မယ်၊ ပုံမှန်လမ်းကြောင်းက ဘယ်လောက်ပို့ မယ်ဆိုတဲ့ market Volume တွက်ဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့လဲ ဒါကြောင့် နောင်အနာဂတ်မှာ တရုတ်ပြည်ကို ပို့နိုင်မဲ့ အရေအတွက်၊ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေကို ပို့နိုင်မဲ့ အရေအတွက်တွေကို ကွဲကွဲပြားပြား သိနေဖို့အတွက် ကြိုး စားနေရမယ်။ အများတမ်းလဲ လုပ်နေရမယ်။ အခုကတရုတ်ကိုချည်း မျှောမှန်းပြီးတော့ ပင်လယ်ရေကြောင်းက မရောင်းရဲဘူး ဆိုရင်လဲပဲ ပင်လယ်ရေကြောင်း ဈေးကွက်တွေက ပျောက်ဆုံးသွားမှာ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့လဲ အမြဲတမ်း စဉ်းစားနေပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ တရုတ်ပြည်နယ်အတွက် လျာထားတာ ဘယ် လောက်လုပ်ရမယ်။ ပင်လယ်ရေကြောင်းက ဘယ်လောက်ပို့မယ်ဆိုတဲ့ ဒီလို လျာထားချက်တွေနဲ့ အစီအစဉ် တွေဆွဲပြီး တင်ပို့ဖို စီစဉ်ချင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတကာမှာ ရှိနေတဲ့ ပင်လယ်ရေကြောင်း ဈေးကွက်တွေ မပျောက် ဆုံးသွားအောင် တည်ဆောက်ထားရမယ်။ နောက်တစ်ခုက ပင်လယ်ရေကြောင်းဈေး ကွက်မှာလဲ အဆင့်မြင့် ဆန်နဲ့ ၂၅ မတ်ဆန်ဆိုပြီး ဈေးကွက်က နှစ်ခုရှိတယ်၊ နှစ်ခုလုံးဈေးကွက်ကို ယှဉ်ပြိုင်ထိုးဖောက်ဖို့ လိုတယ်။ တန်းမြင့် ဆန်တွေပဲ ကြိတ်ပြီး ၂၅ မတ်ဈေးကွက်ကို အမိအရ မဆုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တင်ပို့တဲ့ ပမာ ဏ ကျသွားမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဆင့်မြင့်ဆန်ကော၊ ၂၅မတ် ဆန်ကို ဈေးကွက်ကို မျှတစွာ တင်ပို့နိုင်ဖို့လည်း ချိန်ဆတွက်ချက်ဖို့ ရည်ရှည်မှာ လိုပါတယ်။
မေး။ ။ ပြည်ပ ဆန်တင်ပို့မှုကလဲ လျော့ကျနေတယ်။ နောက် နွေစပါးကလဲ ပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ အနာ ဂတ် ပြည်ပဆန်တင်ပို့မှုနဲ့ ဈေးကွက်အလားအလာအတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲ။
ဖြေ။ ။ ဆန်တင်ပို့မှု လျော့ကျနေတဲ့အတွက် လက်ရှိပြည်တွင်းမှာ စပါးလက်ကျန်တွေကလည်း ကျန်နေသေး တယ်။ နောက် စပါးအသစ်တွေလဲ ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဈေးကွက်ကို ပိုမိုပြီး ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအ နေနဲ့ တိုးချဲ့တင်ပို့ဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားထားတာ ရှိပါတယ်။ မကြာခင်မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဈေး ကွက်အသစ်တွေကို တိုးချဲ့ဖို့နဲ့ G to G ရောင်းဝယ်နိုင်ဖို့ စဉ်းစားပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ပြည်တွင်း ဆန်ဈေးအတွက် ကျွန်တော်တို့လဲ စိုးရိမ်ပါတယ်။ ဆန်ဈေးဟာ လက်ရှိရောင်းထား တဲ့ စာချုပ်တွေလဲ သိပ်နည်းနေတယ်။ ဒီထက်လဲ အလုံးအရင်း ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကြောင့် ကျွန် တော်တို့လည်း အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပြီးတော့ တောင်သူတွေ မကြာခင်ထွက်လာမဲ့ စပါးတွေအတွက် ရသင့်ရ ထိုက်တဲ့ ဈေးနှုန်းရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ နည်းမျိုးစုံ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒါကလဲ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ ဒီနှစ်ဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံ အနေနဲ့က သူတို့ဘက်က တင်သွင်းမှုရှိသလို၊ သူကလဲ တစ်ဘက်ကို ပြန်ရောင်းတာ တွေရှိတယ်။ ဥပမာ အာဖရိက ဈေးကွက်ဆိုရင် တရုတ်ဘက်ကလဲ ဆန်တွေအများကြီး ပြန်ရောင်းတယ်။ ရောင်းတဲ့အတွက် ၂၅ မတ်ဈေးကအာ ဖရိကဘက်မှာ ဈေးကျနေတယ်။ သူတို့နဲ့ ယှဉ်ရောင်းဖို့တောင် ကျွန်တော်တို့မှာ အခက်အခဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့် လာမယ့်ရာသီအတွက် စိုးရိမ်ပြီးတော့ အခုကတည်းက အပူတပြင်း၊ ညှိနှိုင်းတယ် ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ချည်းပဲ လုပ်လို့မရဘူး။ တစ်ချို့ ကိစ္စ တွေက အစိုးရပိုင်းကလဲ ပါဖို့လိုတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အခုလို ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ် ရှင့်။
ရန္ကုန်၊ မတ် ၁၁
ျမန္မာနိုင်ငံဟာ စိုက္ပ်ိုးရေးနိုင်ငျံဖစ်ပြီး လူဦးရေအမ်ားစုဟာ လယ်သမားတျြေဖစ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ ကြောင့် ဆန်စေ်း အတက်အက်၊ ဆန်ဝယ္လိုအား အနည်းအမ်ားဟာ နိုင်ငံကို အနည်းနဲ့၊ အမ်ား ရိုက္ခတ္ပါတယ်။ အခုအခါမျွာမန္မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက ဆန်ဝယ္လက်ျဖစ္တဲ့ တရုတ္ကလည်း သူ့ဆီကို တင်သြင်းတဲ့ ဆန်၊ ဆန္ကြဲတြေနဲ့ ပတ်သက္လို့ တရားဝင္လမ်းကြောင်းကေန လာတာတြေကိုပဲ အား ပေးသြားမယ္လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟျာမန္မာ့ဆန်စေ်းကြက်အတြက် ဘယ္လိုသက်ရောက္မှု ရွိမလဲ၊ျမန် မာနိုင်ငံ ဆန္စပါးအဖြဲ့ခ်ုပ် အေနနဲ့ရော၊ အစိုးရပိုင်း အေနနဲ့ရော ဘာတျြေပင္ဆင်နေသလဲ၊ျမန္မာနိုင် ငံ ဆန္စပါးစေ်းကြက်ရဲ့ အလားအလာကေရာ ဘယ္လိုရွိမလဲ။
ဒါတြေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတေျာ့မန္မာနိုင်ငံ ဆန္စပါးအသင်းခ်ုပ် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးအောင်သန်းဦးကို AMIA- Farmer Digital TV ရဲ့ သတင်းထာက် မစိုးခ်စ္ခ်စ္ပိုင္က သြားရောက်တြေ့ဆုံ မေျးမန်းထား ပါတယ်။
မေး။ ။ တရုတ္နိုင်ငံဘက္က ဆန္နဲ့ ဆန္ကြဲ တင္ပို့မှုမွာ တရားဝင္ကိုပဲ အားပေးမယ်။ တရားမ၀င် ကုန် သြယ္မှုကို ထိထိရောက်ရောက် အေရးယူတာတြေ လုပ္မယ္လို့ တရားဝင် အသိပေးလိုက္တယ္လို့ သိရပါ တယ်။ တရားဝင် တင္ပို့တဲ့ဘက္ကို သြားမယ္ဆိုရင် ဘယ္လိုအခက်အခဲတြေ ရွိလာနိုင္မလဲ။
ျေဖ။ ။ တရားဝင္တင္ပို့မှုနဲ့ သြားမယ္ဆိုရင္လဲ အခက်အခဲ မရွိနိုင္ပါဘူး။ အခုလဲ အခ်ို့ဆန္ကြဲတို့ ဘာတို့ကို တရားဝင် တင္ပို့နေတာတြေ ရွိတယ်။ တရားဝင်သြားဖိျု့မန္မာဘက္ကေတာ့ အကုန်ျပင္ဆင် ထားပါတယ်။ တရုတ်ျပည္မွာ ရွိနေတဲ့ အရင္တုန်းကေတာ့ AQSIQ လို့ခေါ်တဲ့ အရည်အေသြးနဲ့ ကုန္ပ စ္စည်း စစ်ဆေးရေးဌာန၊ျမန္မာနိုင်ငံမွာရွိတဲ့ ပိုးမွှားကာကြယ်ရေးဌာန၊ အစရွိတဲ့ ပစ္စည်းစစ်ဆေးရေးဌာန တြေနဲ့ MOU လက္မွတ်တြေ ထိုးထားတယ်။ ဒီအတြက္ကေတျာ့မန္မာနိုင်ငံ အေနနဲ့ လုပ္နိုင္ပါတယ်။ အခက်အခဲ မရွိပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ္နိုင်ငံနဲ့ တစ္နိုင်ငံ ကုန်သြယ္မျှုပုတဲ့အခါမွာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်း တျြေဖစ္တဲ့ ပိုးမွှားကိစ္စတို့တြေကေတာ့ ကျြန်တ္တောို့ဘက္က လုပ္နိုင္ပါတယ်။ ဘျာဖစ္လို့လဲဆိုရင် အျခား EU တို့ ဂ်ပန္တို့ကိုတောင် ပို့နေနိုင်သေးတာ။ တရုတ်စေ်းကြက်အတြက် လုပ္ဖို့ အပမ်းမကြီး ပါ ဘူး။
မေး။ ။ျမန္မာနိုင်ငံအေနနဲ့ တရုတ္နိုင်ငံကို ဆန္နဲ့ ဆန္ကြဲ တရားဝင် တင္ပို့နိုင္ဖို့အတြက် ဘာအခ်က်တျြေပင် ဆင္ထားလဲ။
ျေဖ။ ။ တရားဝင္လမ်းကြောင်းက ရောင်းနိုင္ဖို့အတြက် အခြန်သက်သာခြင့်တြေ၊ နွစ္နိုင်ငံကြားမွာ ရွိနေတဲ့ ရသင့်ရထိုက္တဲ့ အခြန် ခံစားခြင့်တြေရဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ တစ္ဖက္ကလည်း သူတို့ဘက္က တင်သြင်းတဲ့ ပ စ္စည်းတြေကို ကျြန်တ္တောို့ဘက္ကေန အခြန်သက်သာခြင့် ပေးမယ်။ ကျြန်တ္တောို့ဘက္ကလဲ တင်သြင်းတဲ့ ပစ္စည်းတြေကို အခြန်သက်သာခြင့် ရေအာင္လို့ ကုန္ပစ္စည်းခ်င်း ဖလွယ္တဲ့ စနစ္တစ္ခုကို တည်ဆောက်နေ တယ်။ ဥပမာ ကျြန်တ္တောို့နိုင်ငံကေန တင်သြင်းနေတဲ့ လယ်ယာသုံး ကိရိယာတြေ၊ ဓာတ်ျေမသြဇာ ပိုးသတ် ဆေးအစရွိတဲ့ သြင်းအားစုတြေ ၀ယ်သြင်းတဲ့အခါမွာ အခြန်သက်သာခြင့်ရေအာင် လုပ်ပေးမယ်။ ကျြန်တ္တောို့ တင်သြင်းတဲ့ ဆန်တြေကိုလဲ ဟိုဘက္မွာ အခြန်သက်သာခြင့်ရေအာင် ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲ တစ္ဘက္က ကိုတာကို က်င့်သုံးသလို၊ တစ္ဘက္က ဘာတာစနစ္နဲ့ ဆောင်ရက္ဖြို့ ကြိုးစားနေတယ်။
မေး။ ။ ကုန္ပစ္စည်းခ်င်း ဖလွယ္တဲ့ Barter System (ဘာတာစနစ်)မွာကော အားလုံးပါဝင္လာနိုင် ဖို့ ဘယ္လို စီစဉ်ဆောင်ရက်ြသြားမလဲ။
ျေဖ။ ။ ဒီစနစ်အတြက်ျပည္တငြ်းမွာ တင်သြင်းနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတြေနဲ့ ခ်ိတ္ဆက္မယ်။ နွစ္ခု ပေါင်းစပ္မွာပေါ့။ ဆန်သြင်းလို့ရတဲ့ ပိုက္ဆံနဲ့ သူတို့ဟိုဘက္ကေနပြီးတော့ ပစ္စည်းဝယ် သြင်းတယ္ဆိုရင် နွစ္ခုခ်ိတ္ဆက်ရင် သူ့ အတြက္လဲ အခြင့်အေရးရွိမယ်။ ဆန်သြင်းတဲ့ သူလဲအခြင့်အေရးရွိမယ် ဆိုလို့ရွိရင် ဒီအေပ်ါကို ပါလာကြမွာပါ။
မေး။ ။ လက်ရွိဘဏ္ဍာနွစ္မွာ နယ္စပ္ကုန်သြယ်ရေးကေန ဆန္တင္ပို့မှုက တရုတ္နိုင်ငံရဲ့ တရားမ၀င် ကုန် သြယ္မှု တိုက္ဖ်က်ရေး စီမံခ်က်ကြောင့် အထိနာခဲ့ရတယ်။ လာမည့်ဘဏ္ဍာနွစ်အတြက်ျပည္ပဆန် တင္ပို့မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘာတျြေပင္ဆင်သြားဖို့ လိုမလဲ။
ျေဖ။ ။ ကျြန်တ္တောို့က တစ္နွစ္ကို ဘယ်လောက္ပို့မယ် ဆိုတဲ့ market Plan ဆြဲဖို့လိုမယ်။ ဥပမာ တစ္နွစ္ကို တန္ခ်ိန် သုံးသိန်းပို့မယ် တရုတ္နယ္စပ္က ဘယ်လောက္ပို့မယ်၊ ပုံမွန္လမ်းကြောင်းက ဘယ်လောက္ပို့ မယ္ဆိုတဲ့ market Volume တြက္ဖို့လိုတယ်။ ကျြန်တ္တောို့လဲ ဒါကြောင့် နောင်အနာဂတ္မွာ တရုတ်ျပည္ကို ပို့နိုင္မဲ့ အေရအတြက်၊ တစ်ျခားနိုင်ငံတြေကို ပို့နိုင္မဲ့ အေရအတြက်တြေကို ကြဲကျြဲပာျးပား သိနေဖို့အတြက် ကြိုး စားနေရမယ်။ အမ်ားတမ်းလဲ လုပ်နေရမယ်။ အခုကတရုတ္ကိုခ်ည်း မွေ်ာမွန်းပြီးတော့ ပင္လယ်ရေကြာင်းက မေရာင်းရဲဘူး ဆိုရင္လဲပဲ ပင္လယ်ရေကြာင်း စေ်းကြက်တြေက ပေ်ာက္ဆုံးသြားမွာ ဒါကြောင့်မို့ ကျြန်တ္တောို့ အေနနဲ့လဲ အမြဲတမ်း စဉ်းစားနေပါတယ်။ နောက္ပိုင်းက်ရင်တော့ တရုတ်ျပည္နယ်အတြက် လ်ာထားတာ ဘယ် လောက္လုပ်ရမယ်။ ပင္လယ်ရေကြာင်းက ဘယ်လောက္ပို့မယ္ဆိုတဲ့ ဒီလို လ်ာထားခ်က်တြေနဲ့ အစီအစဉ် တြေဆြဲပြီး တင္ပို့ဖို စီစဉ္ခ်င်းအာျးဖင့် နိုင်ငံတကာမွာ ရွိနေတဲ့ ပင္လယ်ရေကြာင်း စေ်းကြက်တြေ မေပ်ာက် ဆုံးသြားအောင် တည်ဆောက္ထားရမယ်။ နောက္တစ္ခုက ပင္လယ်ရေကြာင်းစေ်း ကြက္မွာလဲ အဆင့်ျမင့် ဆန္နဲ့ ၂၅ မတ္ဆန္ဆိုပြီး စေ်းကြက္က နွစ္ခုရွိတယ်၊ နွစ္ခုလုံးစေ်းကြက္ကို ယွဉ်ပြိုင္ထိုးဖောက္ဖို့ လိုတယ်။ တန်ျးမင့် ဆန်တြေပဲ ကြိတ်ပြီး ၂၅ မတ်စေ်းကြက္ကို အမိအရ မဆုပ္နိုင္ဘူးဆိုရင် ကျြန်တ္တောို့ တင္ပို့တဲ့ ပမာ ဏ က်သြားမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဆင့်ျမင့်ဆန်ကော၊ ၂၅မတ် ဆန္ကို စေ်းကြက္ကို မ်ွတစြာ တင္ပို့နိုင္ဖို့လည်း ခ်ိန္ဆတြက္ခ်က္ဖို့ ရည်ရွည္မွာ လိုပါတယ်။
မေး။ ။ျပည္ပ ဆန္တင္ပို့မှုကလဲ လေ်ာ့က်နေတယ်။ နောက် နြေစပါးကလဲ ပေါ်တော့မယ္ဆိုတော့ အနာ ဂတ်ျပည္ပဆန္တင္ပို့မှုနဲ့ စေ်းကြက်အလားအလာအတြက် ဘာတျြေပင္ဆင္ထားလဲ။
ျေဖ။ ။ ဆန္တင္ပို့မှု လေ်ာ့က်နေတဲ့အတြက် လက်ရျွိပည္တငြ်းမွာ စပါးလက္က်န်တြေကလည်း က်န်နေသး တယ်။ နောက် စပါးအသစ်တြေလဲ ပေါ်လာမျွာဖစ္တဲ့အတြက် စေ်းကြက္ကို ပိုမိုပြီး ပို့ကုန္လုပ်ငန်းရွင်တြေအ နေနဲ့ တိုးခ်ဲ့တင္ပို့ဖို့ တိုက္တြန်ျးေပာကြားထားတာ ရွိပါတယ်။ မကြာခင္မွာလည်ျးမန္မာနိုင်ငံအေနနဲ့ စေ်း ကြက်အသစ်တြေကို တိုးခ်ဲ့ဖို့နဲ့ G to G ရောင်းဝယ္နိုင္ဖို့ စဉ်းစားပါတယ်။
လက်ရွိမွာတေျာ့ပည္တငြ်း ဆန်စေ်းအတြက် ကျြန်တ္တောို့လဲ စိုးရိမ္ပါတယ်။ ဆန်စေ်းဟာ လက်ရွိရောင်းထား တဲ့ စာခ်ုပ်တြေလဲ သိပ္နည်းနေတယ်။ ဒီထက္လဲ အလုံးအရင်း ပေါ်လာမျွာဖစ္တဲ့အတြက် ဒါကြောင့် ကျြန် တ္တောို့လည်း အစြမ်းကုန် ကြိုးစားပြီးတော့ တောင်သူတြေ မကြာခင္ထြက္လာမဲ့ စပါးတြေအတြက် ရသင့်ရ ထိုက္တဲ့ စေ်းနှုန်းရဖို့အတြက် ကျြန်တ္တောို့ နည်းမ်ိုးစုံ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒါကလဲ အရမ်းခက္ခဲပါတယ်။ ဒီနွစ္ဆိုရင် တရုတ္နိုင်ငံ အေနနဲ့က သူတို့ဘက္က တင်သြင်းမှုရွိသလို၊ သူကလဲ တစ္ဘက္ကျိုပန်ရောင်းတာ တြေရွိတယ်။ ဥပမာ အာဖရိက စေ်းကြက္ဆိုရင် တရုတ္ဘက္ကလဲ ဆန်တြေအမ်ားကြီျးပန်ရောင်းတယ်။ ရောင်းတဲ့အတြက် ၂၅ မတ်စေ်းကအာ ဖရိကဘက္မွာ စေ်းက်နေတယ်။ သူတို့နဲ့ ယွဉ်ရောင်းဖို့တောင် ကျြန်တ္တောို့မွာ အခက်အခဲရွိတယ်။ ဒါကြောင့် လာမယ့်ရာသီအတြက် စိုးရိမ်ပြီးတော့ အခုကတည်းက အပူတျပင်း၊ ညှိနှိုင်းတယ် ဆြေးနြေးမှုတြေ လုပ်နေတယ်။ ကျြန်တ္တောို့ခ်ည်းပဲ လုပ္လို့မရဘူး။ တစ္ခ်ို့ ကိစ္စ တြေက အစိုးရပိုင်းကလဲ ပါဖို့လိုတယ်။
ဟုတ္ကဲ့ အခုလိုျေဖကြားပေးတာ ကေ်းဇူးအထူး တင်ရွိပါတယ် ရွင့်။
I precisely desired to appreciate you once more. I do not know what I would've gone through without these methods provided by you regarding that question. It wasavery frustrating problem for me personally, nevertheless finding out this well-written tactic you managed the issue took me to leap for delight. I am just happier for this advice and then sincerely hope you really know whatagreat job you are always doing educating some other people thru your webpage. More than likely you've never met any of us. lacoste outlet
by sjsvbothlf@gmail.com at June 08 2019
I definitely wanted to typeasimple comment in order to thank you for these stunning steps you are showing at this website. My time intensive internet lookup has finally been compensated with reasonable know-how to exchange with my contacts. I 'd state that that many of us readers actually are truly fortunate to exist inaperfect community with so many lovely professionals with great tactics. I feel rather privileged to have seen the webpages and look forward to many more enjoyable moments reading here. Thanks again for all the details. michael kors handbags
by dwybrjkwd@gmail.com at June 08 2019
I want to show appreciation to you for bailing me out of this type of difficulty. Asaresult of looking out through the online world and finding recommendations which were not helpful, I assumed my life was well over. Being alive without the answers to the problems you have sorted out through the review isacrucial case, and the ones that might have negatively damaged my career if I had not come across your web page. Your personal talents and kindness in dealing with all areas was very useful. I'm not sure what I would have done if I hadn't come upon suchapoint like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks for your time very much for your high quality and results-oriented guide. I won't hesitate to endorse your web blog to anyone who should have guidance about this topic. yeezy 700
by ibvlcz@gmail.com at June 05 2019
My wife and i have been quite excited that John could complete his researching through your ideas he got through the web pages. It is now and again perplexing to just choose to be makingagift of secrets and techniques people might have been trying to sell. And we all fully grasp we now have the website owner to be grateful to because of that. The type of illustrations you've made, the easy blog menu, the friendships you can make it easier to engender - it's all sensational, and it's really assisting our son in addition to the family know that this article is entertaining, which is certainly tremendously indispensable. Thank you for everything! chrome hearts online
by ucmrayoowm@gmail.com at June 04 2019
My wife and i have been so happy when Jordan managed to complete his research out of the precious recommendations he grabbed when using the web site. It is now and again perplexing to simply be handing out solutions which the others have been making money from. So we acknowledge we've got the website owner to thank for this. These illustrations you made, the simple site menu, the friendships you will assist to foster - it's all exceptional, and it is aiding our son in addition to the family consider that the subject is pleasurable, and that's quite indispensable. Thank you for the whole thing! curry5shoes
by tcnwskk@gmail.com at June 01 2019
I wish to express my thanks to the writer for bailing me out of suchamatter. Asaresult of researching through the the web and getting opinions which are not productive, I thought my entire life was well over. Being alive without the answers to the problems you've sorted out through your main short article isacrucial case, and the ones which might have inanegative way affected my career if I hadn't noticed your web page. Your good know-how and kindness in handling all the stuff was important. I'm not sure what I would have done if I had not come across suchasolution like this. I can also at this time look ahead to my future. Thanksalot so much for this professional and sensible guide. I will not think twice to suggest your web sites to anyone who needs support about this matter. fila disruptor 2
by vtylbysvqbf@gmail.com at May 31 2019
I'm just writing to make you be aware of of the excellent discovery my cousin's princess encountered reading through your blog. She came to understand several pieces, which included what it is like to have an amazing coaching mindset to get the rest with ease grasp specific very confusing issues. You truly did more than our own expected results. I appreciate you for displaying these productive, trusted, revealing and also fun guidance on your topic to Kate. yeezy boost 350
by uxhwtqyzkqv@gmail.com at May 28 2019
Thank youalot for giving everyone sucharemarkable chance to read in detail from this web site. It is usually very useful and also stuffed withagreat time for me and my office mates to visit your site the equivalent of3times per week to find out the latest issues you will have. Of course, we are certainly fulfilled for the unbelievable things you give. Selected4ideas in this post are withoutadoubt the most suitable I've had. nike foamposite
by ydgkfjf@gmail.com at May 28 2019
I and also my pals have been studying the nice recommendations on your site and so at once I gotaterrible feeling I had not expressed respect to you for those secrets. Those boys were definitely certainly joyful to study them and have in effect certainly been tapping into those things. We appreciate you genuinely quite helpful and also for having varieties of excellent themes millions of individuals are really wanting to be aware of. My personal honest regret for not expressing appreciation to sooner. zx flux [url=http://www.adidaszxflux.com]zx flux[/url]
by tvbswge@gmail.com at May 27 2019
I am glad for commenting to make you understand whatareally good experience my girl went through viewing your site. She realized some pieces, not to mention what it's like to haveamarvelous helping heart to getanumber of people just completely grasp various extremely tough matters. You undoubtedly surpassed my desires. I appreciate you for showing these helpful, dependable, informative and even unique tips on this topic to Kate. asics sneakers
by mwpuqshsfme@gmail.com at May 24 2019